Izindaba - AmaPolymer avimbela inkungu engaba nobungozi ngesikhathi sokuvakasha kwamazinyo
Ama-polima avimbela inkungu engaba yingozi ngesikhathi sokuvakasha kwamazinyo
Ngesikhathi sobhadane, inkinga yamaconsi amathe afakwa emoyeni yihhovisi likadokotela wamazinyo inkulu
Ephepheni elishicilelwe kuleli sonto kuPhysics of Fluids, yi-AIP Publishing, u-Alexander Yarin nozakwabo bathola ukuthi amandla wethuluzi elidlidlizelayo noma lokuprakthiza udokotela wamazinyo awahambelani nezakhiwo ze-viscoelastic zama-polymers asebangeni lokudla, njenge-polyacrylic acid, basebenzise njengenhlanganisela encane yokunisela emanzini wamazinyo.
Imiphumela yabo yamangaza. Ukuhlanganiswa okuncane kwama-polymers akuqedanga ngokuphelele ukuqeda i-aerosolization, kepha kwenze ngokukhululeka, kukhombisa i-physics ye-polymer eyisisekelo, njengokushintshwa kwekhoyili, okusebenzele injongo ehlosiwe kahle.
Bahlole ama-polymers amabili agunyazwe yi-FDA. I-Polyacrylic acid ibonakalise ukuthi isebenza kangcono kune-xanthan gum, ngoba ngaphezu kwe-viscosity yayo ephakeme (izingcindezi ezinwebeka kakhulu ekunwebeni), iveze i-viscosity ephansi kakhulu, eyenza ukumpompa kube lula.
"Okwakumangaza ukuthi ukuhlolwa kokuqala ebhodini lami kwawufakazela ngokuphelele umqondo," kusho uYarin. “Kwakumangalisa ukuthi lezi zinto zokwakha zazikwazi ukucindezela kalula futhi ngokuphelele ukucindezela i-aerosolization ngamathuluzi wamazinyo, namandla amakhulu angenamandla. Noma kunjalo, amandla okunwebeka akhiqizwa izithasiselo ezincane ze-polymer ayenamandla kakhulu. ”
Ukutadisha kwabo kubhale ukuqhuma okunamandla kwamaphakethe wamanzi ahlinzekwa ngamazinyo nezinsini ithuluzi lamazinyo likwazi ukuliqinisa. Inkungu yokufafaza ehambisana nokuvakashela udokotela wamazinyo ingumphumela wamanzi ahlangabezana nokudlidliza okusheshayo kwethuluzi noma amandla we-centrifugal we-drill, aqhekeza amanzi abe ngamaconsi amancane bese ewahambisa lawa.
Ukuhlanganiswa kwe-polymer, lapho kusetshenziselwa ukunisela, kucindezela ukuqhuma; esikhundleni salokho, ama-macromolecule e-polymer alula njengamabhande enjoloba anciphisa ukuvuthwa kwamanzi. Lapho ichopho lethuluzi elidlidlizelayo noma lokuprakthiza amazinyo lingena kusixazululo se-polymer, isixazululo sichuma sibe yimicu efana nezinyoka, ebuyiselwa emuva esihlokweni sethuluzi, kuguqula amandla ejwayelekile abonakala ngamanzi amsulwa kudokotela wamazinyo.
“Lapho amaconsi ezama ukuphuma emzimbeni oketshezi, umsila wedonsa welulwa. Yilapho kusebenza khona amandla amakhulu okunwebeka ahambisana nokushintshwa kwekhoyili kwama-polymer macromolecule, ”kusho uYarin. "Bacindezela ukunwebeka kwemisila bese bedonsela amaconsi emuva, okuvimbela ngokuphelele ukukhuphuka komoya."
Izinto ezihlinzekwe yi-American Institute of Physics. Qaphela: Okuqukethwe kungahle kuhlelelwe isitayela nobude